Archive du 20200411
4x4 namaky barazy teny Ivandry Tapa-tongotra ilay polisy
Nisy sakana napetraky ny polisim-pirenena tetsy Ivandry ho fampiharana ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina.
Mahery Lanto Manandafy “Tsy ny filoha no nanome baiko ireny fanagadrana ireny”
Omaly no notanterahana ny fakàna am-bavany an`i Mahery Lanto Manandafy (MLM), tetsy amin` ny sampandraharaha misahana ny “cybercriminalité”
Halatra solika JIRAMA Mitombo isa ireo voarohirohy
Niaina fahatapahana herinaratra niverimberina ny distrikan`i Mandritsara noho ny halatra gazoala mamatsy ny milina mamokatra ny herinaratra any an-toerana.
Governoran’ny Faritra Analamanga Nizara fanomezana ho an’ny mpanao gazety
Vary, menaka, siramamy ary savony no nomena ny mpanao gazety omaly teny amin’ny biraon’ny Faritra Analamanga tetsy Ambohidahy.
Rakotoson Jean Richard Misy fomba tsotra hanamboarana ny « solution hydroalcoolique »
Manama ny injeniera Rakotoson Jean Richard fa azo atao tsara ny manamboatra ny « solution hydroalcoolique » eto Madagasikara sy ny manaparitaka an’izany manerana ny nosy.
Real TV Efa mandeha indray
Naneho Fisaorana sy Fankasitrahana eram-po eran-tsaina ny rehetra nankahery sy nanohana azy tao anatin’ny fotoan-tsarotra nisian'ny fahatapahana ny fahitalavitra Real TV Madagasikara.
Paska ao anatin’ny asa Nankahery ny ekipany ny komandin'ny zandarimaria
Amin’ izao fankalazana ny fetin’ny paska 2020 izao, izay ao anatin'ny vanim-potoana sarotra noho ny valanaretina "coronavirus"
Mpihira ara-pilazantsara Malagasy Efa resin’ny Tompo ny coronavirus
Nahavita nanentana mpino Kristianina maro nanatontosa niaraka tamin’izy ireo ny atao hoe “Hiaka sy fiderana” nanomboka omaly alina tamin’ny 7 ora mpihira ara-pilazantsara malagasy.
Polisim-pirenena Nandamina ny teny Anosibe sy ny manodidina
Nanomboka ny alakamisy lasa teo dia nisy barazy teo amin` ireo faritra hahafahana miditra ao Anosibe: Namontana, Anosizato, 67Ha eo amin` ny JIRAMA, Seoul Hotel Andavamamba, Anosipatrana…
Arphine Helisoa Mbola tsy nahazo LP indray
Nametraka fangatahana ny amin’ny mba hanomezana fahafahana vonjimaika (LP) ilay mpanao gazety nampidirina am-ponja, Arphine Helisoa,
Tambazotran-tserasera Miparitaka izay tsy izy ny vaovao tsy marina
Mila itandremana fatratra amin’izao fotoana izao ny vaovao miely sy misy manely ao anaty tambazotran-tserasera ao.
Morondava Sarety telo tratra nitondra hazo sarobidy an-tsokosoko
Mandeha ihany koa ny fanararaotana amin’izao fotoanan’ny fihibohana izao. Sarety miisa telo nitondra hazo sarobidy miisa 28 no tra-tehaky ny mpitandro ny
Fahatongavana teratany Sinoa Nisavorovoro ny tany Mitsinjo
Efa lasa miteraka tebiteby amin` ny vahoaka Malagasy ity aretina “coronavirus” ity ka rehefa mahita teratany vahiny dia lasa miteraka savorovoro tsy fidiny indrindra moa any amin` ny faritra.
Olona mitsirara eny an-dalambe Mahalasa saina ny maro
Mampametra-panontaniana ny maro ihany ny fahitana ireo karazan’olona mitsirararara eny rehetra eny tato ho ato izay.
Tahirin-tsolika Manana hatramin` ny 48 andro i Madagasikara
Nahitàna fihenana 40% hatramin` ny 50% ny fanjifàna solika, hoy ny ofisim-pirenena misahana ny akoran`afo.
Noho ny Coronavirus Nihena hatrany amin’ny 80% ny fanjifana chocolat
Roa andro mialohan’ny Paska dia mbola maro be ny Chocolat tsy lafo. Nanambara ny tompon’andraikitra ara-barotry ny Chocolaterie Robert eto Antananarivo,
Mpianatra eny Ankatso Misy mitaky fanemorana ny fanadinana
Noho ny hasarotan` ny fiainana manoloana ny fepetra noraisin` ny fanjakana amin` ny ady amin` ny COVID-19, maro ireo fikambanan` ny mpianatra no mangataka ny fanemorana ny fanadinana eny amin`ny oniversitem-panjakana.
Mandritsara Mirongatra ny halatra lavanila manta
Lavanila manta milanja 70 kg no voasaron` ny zandarimariam-pirenena ao Mandritsara.
CUA Nizara vatsy ho an’ireo gadra tsy ampy taona
Manoloana ny fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena amin'ny ady amin'ny valan'aretina coronavirus ary amin'izao ankatoky ny paska izao,
Chômage technique Nivadika ho fandroahana mpiasa
Betsaka ireo olona misedra olana amin’izao fotoanan’ny fihibohana izao. Lohalaharana amin’izany ireo mpiasa eny anivon’ny orinasa afaka haba.
Vahoaka Malagasy Efa misy misotro ny aleoko maty
Izahay tsy maintsy mitady fa mila mihinana isan’andro. Aretin’ny mpanankarena io fa tsy mahavoa anay.
Tinoka Roberto Nanatitra fanampiana tany Toliara
Manoloana ny ady atao amin'ny fihanaky ny tsimokaretina Covid-19 dia nitondra fanampiana hoentina miatrika izany tany Toliara ny Minisitry ny Tanora sy Fanatanjahantena,
Namontana Nakatona avokoa ireo mpivaro-kazo sy mpanao volo
Mbola betsaka amin’ireo mpivarotra eto amintsika no mafy loha tsy manaja ny lamina napetraka.
Bemanevika-Sambava Mbola nikiry nanao "Braderie" ireo mpivarotra
Taitra ny mponina tao Bemanevika Sambava ny alakamisy lasa teo raha nahita ireo fiara nitondra entam-barotra hanaovana ''braderie''.
Tohana ara-tsaina ho an’ireo mararin’ny COVID19 Miditra an-tsehatra ireo psykôlôgy Malagasy
Manoloana ny zava-misy ao anatin’ny fiatrehana izao areti-mandripaka COVID 19 eto amin’ny firenena izao dia nampanantsoina ihany koa ireo psykôlôgy na
Kaominin’i Tanjombato “Lasa tsy matahotra ilay valan’aretina ny olona”
Ampatsiahivina hatrany, hoy ny ben’ny tananan’i Tanjombato, Tovo Rakotojohary, fa anaty krizy ara-pahasalamana isika izao fa tsy krizy ara-tsakafo